ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၁၀) – Thabarwa Centre
ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၁၀)
31 October, 2012 Soe Win Htut	တရားဆောင်းပါးများ
Jan 18, ’12 5:04 AM
အမှန်တရားကို သိနားလည်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောစိတ်၊ ဥပါဒါန်-ဆုပ်ကိုင်မှု နည်းသော ပွင့်လင်းရိုးသားသော သဘောထားများ ရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဟိုအရေး၊ ဒီအရေး၊ ဟိုပူ၊ ဒီပူ၊ ယောက်ယက်ခတ်နေသော၊ ဟိုဟာ-ဒီဟာ အလိုမကျဖြစ်နေသော၊ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတတ်သော သဘောထားတို့ တတ်နိုင်သမျှ နည်းပါးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ဟိုပူ၊ ဒီပူ၊ ဟိုမကျေနပ်၊ ဒီမကျေမနပ်ဖြစ်နေမှုတို့ တတ်နိုင်သမျှ နည်းပါးစေရန် … လောဘ၊ ဒေါသကို စွန့်လွှတ်ခြင်းအလုပ် (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာအလုပ်)တို့ကို တတ်စွမ်းသမျှ အကန့်အသတ်မထားပဲ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
လောဘ၊ ဒေါသကို စွန့်လွှတ်ခြင်းအလုပ် (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာအလုပ်)တို့မပါဝင်ပဲ ပူလောင် ယောက်ယက်ခတ်နေသောစိတ်များ(သို့) ဘာမှ-ညာမှ-ဟိုလိုမှ-ဒီလိုမှ ဆိုပြီး ဆုပ်ကိုင်မှု အားကြီးသောဥပါဒါန်စိတ်များဖြင့် အမှန်တရားကို လေ့လာပါက အမှန်တရားဟူသည် နားလည်ရန် ခက်ခဲသည်။ မြင့်သည်။ ဘာတွေမှန်းမသိ စသည်ဖြင့် ထင်မှတ်ရပါသည်။
တနည်းဆိုသော် အမှန်တရားနားလည်မှုသည် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကို စွန့်လွှတ်နေခြင်းအလုပ် (သို့) ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ အလုပ်တို့ကို ငြိတွယ်မှုမပါ လုပ်ရုံသက်သက် လုပ်တတ်ခြင်း တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါသည်။
အမှန်တရားဟူသည် နိမ့်သည် မြင့်သည်မဟုတ်ဘဲ အမှန်တရားသည်သာဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ အားကြီးသော လောဘ-ဒေါသ-ဥပါဒါန် ဆုပ်ကိုင်မှုများက ဆွဲချထားသဖြင့် အမှန်တရားသည် မြင့်နေသည်။ နားလည်ရန် ခက်ခဲသည် ဟု ထင်မှတ်ရလေသည်။ ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ ကို “တစ်ချိန်မှာတစ်စိတ် သာ ဖြစ်ခွင့်ရှိသော အမှန်တရား“ (အပိုင်း ၁၀) ကို ဖော်ပြရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ပါသည်။
တစ်ချိန်မှာတစ်စိတ် သာ ဖြစ်ခွင့်ရှိသော အမှန်တရား (သို့) ရှေ့စိတ်မရှိတော့မှသာ နောက်စိတ်ပေါ်ခွင့်ရှိသော အမှန်တရား
၁) သောကစိတ်၊ လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်တွကို အရှိ-အဟုတ်ထင်ကာ ….ခံစားနေမှု-သိနေမှုအစား “တစ်ချိန် မှာ တစ်စိတ်သာ ဖြစ်ခွင့် ရှိသော အမှန် တရား” (သို့) “ရှေ့စိတ်မရှိတော့မှ နောက်စိတ်ပေါ်ခွင့်ရှိသောအမှန်တရား” ကို ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းခြင်း အားဖြင့် မိမိ သတိထား မိ နေသော သောကစိတ်၊ လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်များဟူသည် အမှန်တကယ်တော့ “ရှေ့က ချုပ်ပျောက်ပြီး နှင့်သော မရှိတော့သည့် စိတ်များကို” အရှိလုပ် – ပုံဖော် – အသက်သွင်းထားမှု သက်သက် သာဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံ နှလုံးသွင်းပါ။
၂) သတိထားသောစိတ်ဖြစ်ပါက (နောက်မှရှုသောစိတ်) ဖြစ်ပေါ်ပါက “ ရှေ့စိတ် (အရှုခံစိတ်များမှာ) မရှိတော့“ ဟူသော အမှန်တရားကို ယုံကြည် နားလည်လျှက် မိမိ သတိထားမိနေသော စိတ်ဟူသမျှသည် “အမှန်တကယ်တော့ ရှေ့က ချုပ်ပျောက်ပြီးဖြစ်သည့် မရှိတော့သည့်စိတ်´´ကို ပြန်လည် အသက်သွင်း ပုံဖော်-ဖန်တီးလှည့်စားထားမှု သက်သက် သာ ဖြစ်ကြောင်း သတိရ ယုံကြည် လက်ခံ နှလုံးသွင်းပါ။
၃) “အရှုခံ-ရှေ့စိတ်” မရှိတော့မှသာ “အရှုဉာဏ်-နောက်စိတ်” က ဖြစ်ခွင့်ရှိသော အမှန်တရား ကို နားလည်လက်ခံလျှက် …
မိမိ သတိထားမိနေသော တွေးကြံစိတ်၊ သောကစိတ်၊ လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ ခံစားချက်၊ ဝေဒနာ တို့၏ ဖြစ်ခြင်း-ပျက်ခြင်းဟူသည် အမှန်တကယ်တော့ – “ချုပ်ပျောက်ပြီးဖြစ် သည့် မရှိတော့သည့် ရှေ့စိတ်၏ချုပ် ပျောက်ပြီးမှု အရှိန်များကို အရှိလုပ် ပုံဖော်အသက်သွင်း-ဖန်တီး-လှည့်စားမှုကြောင့်သာ“…. တကယ်ဖြစ်နေ သယောင် ထင်မှတ်နေရသော ပညတ်တရား များသာ“ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံ နှလုံးသွင်းပါ။
“ရှေ့ စိတ်ဖြစ်သည်ကို နောက်စိတ်က သတိထားနေမိသည်” ဟု နားလည်မှုအစား “ရှေ့ စိတ်မရှိတော့မှ နောက်စိတ်က သိခွင့်-ဖြစ်ခွင့်ရသည် ဟူသောအမှန်တရားကို ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလျှက် မိမိသတိထားမိနေသော ရှေ့စိတ်များသည် ပညတ်စိတ်များ စိတ်အတုများသာဖြစ်ကြောင်း နားလည် လက်ခံကာ ဖြစ်ပေါ်နေသော စိတ်များအပေါ် ငြိတွယ်-ဆုပ်ကိုင်-အဟုတ်ထင်နေမှု ကို စွန့်လွှတ်ပါ။
´´မရှိတော့တဲ့စိတ်တွေ ၊ ဝေဒနာတွေ၊ ရုပ်တွေကို အရှိလုပ် ပုံဖော် ဖန်တီး ပြုလုပ်မှုတွေပဲ တကယ် ဖြစ်ပြီး တကယ်ပျက်နေတာပါ။“
(ရှေ့စိတ်များရဲ့) မရှိတော့တဲ့ ချုပ်ပျောက်မှု အရှိန်ကို အရှိယူပြီး “ မြင်တယ်၊ ကြားတယ်၊ နံတယ်၊ တွေးတယ် ကြံတယ်၊ နာတယ်၊ ကိုက်တယ်၊ ပူတယ်၊ အေးတယ်၊ တွေးတယ်၊ ခံစားတယ် ´´ စသည်ဖြင့် ထင်မှတ်ရအောင် အသက်သွင်း၊ ပုံဖော် ဖန်တီး ပြုလုပ်မှုတွေပဲ တကယ် ဖြစ်ပြီး တကယ်ပျက်နေတာပါ။
ဘာပဲသိနေ-ခံစားနေ-တွေးတောနေပါစေ … “မရှိတော့တဲ့ ချုပ်ပျောက်မှုအရှိန်ကို အရှိယူပြီး´´ … သိနေ-ခံစားနေ-တွေးတောနေတာပါပဲ။
“တစ်ချိန်မှာ တစ်စိတ်သာဖြစ်ခွင့်ရှိခြင်း အမှန်တရားကြောင့် ´´ ရှေ့စိတ် ချုပ်ပျောက် ပြီးတော့ မှ မရှိတော့မှ နောက်စိတ်ပေါ်ခွင့်ရှိပါသည်။
အဲဒါကြောင့် ဘာပဲသိသိ မရှိတော့မှ သိခွင့်ရှိတဲ့သဘောပါ။
ဘာပဲ ခံစား-ခံစား ရှေ့စိတ်တွေ မရှိတော့မှ ခံစားနေတဲ့သဘောပါ။
မရှိတော့တာတွေကို အရှိလုပ်- ပုံဖော်-အသက်သွင်း-ဖန်တီးပြုလုပ်မှုတွေ ပဲ ဖြစ်ပေါ် ပျက်စီးနေတာပါ။
…… မရှိတော့တာတွေကို အရှိလုပ်- ပုံဖော်-အသက်သွင်း ရင်း ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာပါ။
ဖောက်ပြန်ပျက်စီးရင်း မရှိတာကို အရှိလုပ် ပုံဖော်-အသက်သွင်း-ဖန်တီးလှည့်စားနေတာပါ။
“မရှိတော့တာကို အရှိလုပ် ပုံဖော်-အသက်သွင်းနေ တဲ့ ဖောက်ပြန် ပျက်စီးမှုတွေပဲ“ တကယ်ဖြစ်နေတာပါ။
-ပူမှု-အေးမှု-ကောင်းမှု-ဆိုးမှု-ခံစားမှု-တွေးကြံမှုတွေ က ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတယ် လို့ နားလည်မှုအစား…..
….. ပူမှု-အေးမှု-ကောင်းမှု-ဆိုးမှု-ခံစားမှု-တွေးကြံမှု ဆိုတာ တကယ်တော့ ……“မရှိတော့တဲ့ ချုပ်ပျောက်ပြီးသွားတဲ့ ရှေ့-နာမ်ခန္ဓာများ၏ ချုပ်ပျောက်ပြီးသွားသည့် မရှိတော့သည့် အရှိန်များကို အရှိလုပ်- ပုံဖော်အသက်သွင်းမှုတွေကြောင့်“ တကယ်ဖြစ်နေသယောင် ထင်မှတ် ရကြောင်း နားလည်လက်ခံပါ။
မရှိတော့တဲ့ ရှေ့ – နာမ်ခန္ဓာများ၏ ချုပ်ပျောက်ပြီးဖြစ်သည့် အရှိန်များကို အရှိလုပ်- ပုံဖော်အသက်သွင်းမှုတွေပဲ တကယ်ဖြစ်နေ – ပျက်နေတာပါ။
နိရောဓ သစ္စာသည်သာ တစ်ခုတည်းသော အရှိတရား
အဆိုပါ မရှိတော့သည့် ရှေ့နာမ်ခန္ဓာရဲ့ “ချုပ်ပျောက်ပြီးသွားသည့် အရှိန်များကို အရှိလုပ်- ပုံဖော်အသက်သွင်းနေသော စွမ်းရည်သတ္တိရှိ သည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု ဒုက္ခသစ္စာတရား“ သည် လည်း တကယ်တော့ နဂို အရှိတရား-တည်မြဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘဲ …….
အတိတ်က မရှိတာကို အရှိထင်အောင် ပုံဖော်အသက်သွင်းခဲ့မှုများအပေါ် (သို့) မရှိတော့သည့် ချုပ်ပျောက်ပြီးဖြစ် သည့် ရှေ့နာမ်ခန္ဓာများ ၏အရှိန်များကို အရှိလုပ် ပုံဖော် အသက်သွင်းကာ “ငါပဲ၊ သူပဲ၊ စိတ်ပဲ၊ ဝေဒနာပဲဟူ၍ အထင်မှားအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်နေ သည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးများမှု“ တို့ အပေါ် အတိတ်က အတည်ယူ-အဟုတ်ထင်- အဓိကထားခဲ့မှုအကြောင်းတရားကြာင့် …
. ယခုပစ္စပ္ပါန်တွင် ချုပ်ပျောက်ပြီးဖြစ်သော ရှေ့စိတ်များကို တကယ်ရှိနေသယောင်-ဖြစ်နေသယောင် “မရှိတာကို အရှိလုပ်- ပုံဖော်အသက် သွင်းနေသည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုများ“ … အကျိုးတရားအနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနေရပေသည်။
အတိတ်က အဟုတ်ထင်-အတည်ယူ-ဆုပ်ကိုင်မှု (အကြောင်းတရား) ကြောင့်သာ…… ….. ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ အကျိုးတရား (“မရှိတာကို အရှိလုပ် နေသည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီး မှုများ“) ဖြစ်သောကြာင့် နဂိုတည်းကရှိနေသော – နဂို အရှိတရားတော့ မဟုတ်ပေ။